Global Voices teny Malagasy · Mey 2018
Janoary 2022 23 Lahatsoratra
Tantara misongadina tamin'ny Mey 2018
Korea: Vahiny Eo Amin'ny Fahitalavitra Koreana
Misy fandaharana eo amin'ny fahitalavitra mikasika vehivavy vahiny mahay miteny Koreana ary maneho ny heviny momba ny fiarahamonina sy ny kolontsaina Koreana
Azia Atsinanana21 Mey 2018
Azia Atsimo18 Mey 2018
Afrika Mainty17 Mey 2018
Tantara tamin'ny Mey, 2018
Amerika Avaratra 31 Mey 2018
Manondrana Ny Korontana Sy Fampielezankevitra Ho Any Amin'ny Balkan Ny Governemanta Hongroà
Eoropa Afovoany & Atsinanana 31 Mey 2018
Nasehon'ny fanadihadiana iray nataon'ny fampahalalambaovao makedoniana ny fifandraisana ara-bola sy ara-pananana eo amin'ireo media avy amin'ny farany havanana ao Makedonia sy ireo mpiray antoka amin'ny antooko eo amin'ny fahefana ao Hongria
Brezila: Toro-hevitra hiatrehana ny krizy avy amin'ilay mpivarotra popcorn an-dalambe
Amerika Latina 31 Mey 2018
Talohan'ny fanombohan'ny krizy ara-toekarena manerantany, an-dalana ho lasa mpandraharaha malaza ao amin'ny firenena ilay Breziliana mpivarotra an-dalambe iray tamin'ny fanaovana zavatra iray: mivarotra popcorn, miaraka amin'ny fahaizana manokana.
“Tondroina hisolotena zaratany ny vehivavy, ka masina ny vehivavy noho izany”
"Manana anjara toerana lehibe tokoa izahay vehivavy Arhuaco."
Nahoana (ny tanora) no laharam-pahamehana
Tokony hiseho amin'ny voambolana "tahaka ny ho avy, manintona, falifaly, marina" ny tanora.
Afrika Mainty 31 Mey 2018
Tsy daltoniana tokoa ny Afrikana Tatsimo. Ny efa-polo taonan'ny apartheid no niantoka fa raiki-tapisaka ao am-po sy ny sain'ny olom-pirenena maro ao Mzansi (araka ny ahafantarana ny firenena ao an-toerana) ny hevitra momba ny firazanana. Ny fiandohan'ny demokrasia tamin'ny taona 1994 no niteraka fanantenana ho an'ny fiarahamonina mitovy.